10043 responded out of 26951 polled
နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ဘာ့ကြောင့် လိုအပ်တယ်ထင်ပါသလဲ?
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာမှာ မည်သည့်အချက်များက အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် မည်သည့်အရာကို စတင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသလဲ?
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လူငယ်များအနေဖြင့် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုပါသနည်း?
ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေသော လူငယ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ)မှ မည်သို့ ပံ့ပိုးကူညီမှုမျိုး ပေးစေလိုပါသနည်း?
348 responded out of 380 polled
9401 responded out of 9699 polled
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အကန့်အသတ
274 responded out of 299 polled
9015 responded out of 9186 polled
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ြေ
276 responded out of 302 polled
5738 responded out of 7351 polled
4726 responded out of 5232 polled